Ubunewunewu nobunewunewu kwiApartment yeBijou Notting Hill
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMel
Galela ikomityi yekofu yeKrups kwaye uyonwabele kwipatio, okanye uthathe ixesha lokujonga iintlobo ngeentlobo zemizobo kweli khaya lintle. Kukho iifreyimu zesipili ezihonjisiweyo, imifanekiso eqingqiweyo kunye ne-objets d'art, kunye nokwakheka kobunqunu okumangalisayo kwigumbi lokulala.
QAPHELA: Ndisebenzisa inkqubo yococeko engqongqo ngakumbi kunangaphambili. Yonke imiphezulu ivalwe iintsholongwane, yonke ilinen ihlanjwe kwiqondo lobushushu eliphezulu kwaye ivalelwe yodwa phambi kokuba ingene kwindawo.
QAPHELA: Ndisebenzisa inkqubo yococeko engqongqo ngakumbi kunangaphambili. Yonke imiphezulu ivalwe iintsholongwane, yonke iline…
“Ukuba nendawo yokufihla intloko encinci embindini weyona ndawo iphumayo eLondon kuthetha ukuba ungangena kwaye uphume ngaphandle kokuchitha usuku lonke undwendwela izinto ezinomtsalane. Ungeza kwaye uhambe ngokulula, uzihlaziye ngokuphumla imizuzu embalwa ngaphambi kokuba uphume kwakhona njengoko yonke into ifikeleleka ngokulula. Indawo ezolileyo yokuphumla kude nemarike ephithizelayo, iindawo zokutyela, inkcubeko yecafe, iithiyetha ezinkulu zemiboniso bhanyabhanya, ifashoni emnandi kunye nokuthenga izipho konke okukumgama wokuhamba ukulindele.”
“Ukuba nendawo yokufihla intloko encinci embindini weyona ndawo iphumayo eLondon kuthetha ukuba ungangena kwaye uphume ngaphandle kokuchitha usuku lon…
- Mel, umbuki zindwendwe wakho
5.0 (iingxelo zokuhlola 37)
Umoya opholileyo waseNotting Hill uyosulela. Iindwendwe zingonwabela iicafe, iiresityu, idelis, iiboutiques, iMarike yasePortobello, izinto zakudala, icinema, kunye neendawo eziluhlaza. Kukwakho nonxibelelwano olukhulu lwezothutho kwezinye iindawo ezinomtsalane zaseLondon kunye nezikhululo eziphambili.